Impazamo eyenziwa yintombazana nganye ngosuku, nendlela yokuyilungisa .
Sasihlala senza oko, kwaye saza sothuka, kutheni kungakhange kusebenze nalo mntu? Ngaba uyabubula? Musa ukucaphuka. Ngokukodwa kuwe, sishicilela iimpazamo ezintlanu eziqhelekileyo ngosuku kunye neengcebiso malunga nendlela yokuzilungisa ngokukhawuleza!
I mpazamo 1.
Uhamba nomhla nomfana, uthathe intombi yakho kunye nawe
Ngaloo ndlela, umbonisa ukuba uyathandwa kunye nokufaneleka. Ngaba akunjalo, ngaba kuhlale kupholile ukuba ube ne-retinue kwi-women-in-waiting? Enyanisweni, kuye akubukeka ngathi. Kuba umntu akukho ntoyikisayo ngaphezu kweenkampani zamantombazana. Kungenxa yokuba uninzi lwazo zonke ukwesaba ukuba zikarhatywe esidlangalaleni.
Kwaye kuya kuba ngcono.
Hlela yonke into ukuze udibana okanye ube yedwa. Mcele ukuba akuncede ujongane neefowuni zakho eziphathekayo okanye kwibhasi elisondeleyo ye-Antonovka. Oku kuya kukunika ithuba lokuthetha kunye, kwaye ngubani owaziyo, mhlawumbi, kwaye adibanise uthando lwakho.
I mpazamo 2.
Unika unyulo lwakho lonke ingqalelo.
Wena, ekugqibeleni, wagqiba kwinqununu yakho kwaye ngoku uyamnceda. Kodwa ukuba unomdla kakhulu ukubonisa iimvakalelo zakho, kunokususa kuye. Kubafana, ihlabathi lethu leemvakalelo lihlezi. Kwaye ke, xa ebona ukuba unamandla ngokupheleleyo, uyaqonda ukuba kufuneka akwenze kangako ukuze athole uthando lwakho.
Khupha ingqalelo kubahlobo bakhe, umzekelo, ukuhleka amahlaya abo kunye nokudlala ngothando nabo. Makuyike into yokuba unako ukuya kwelinye, kwaye uya kulahlekelwa ngubo buncwane. Kodwa qwa lasela: kufuneka akubone ubuhlobo nabanye, kwaye unganomdla kubo. Ukudlala ngothando oluphambili lujoliswe kuye.
I mpazamo 3.
Uhlala uvele naphi na ukuthanda ukuvela khona.
Uyazi ngokucacileyo ukuba kwaye liphi iyure afika ekhaya emva kokufunda okanye ukusebenza-kwaye uhlala ubonakala uvele ngephambano endleleni yakhe ngeli xesha. Ngoko kutheni akakuboni nawe? Ngenxa yokuba abafana njengamantombazana angenakulinganiswa, abafuna ukuzingela. Ufuna ukucinga ukuba inkosikazi engenakufikeleleka iyamthanda, kwaye ayiyiyo inqabileyo engummangaliso okhangela emva kwayo yonke into.
Khangela i-tusovka, apho uya kuba khona khona, ahlale edlala ngothando kunye naye, aze aphelile. Ukuhamba okunengqiqo - "ngoku ndikunye, kodwa umzuzu olandelayo ndihambe" - uya kumenza aphenduke kwaye akufune wena kuphela.
I mpazamo 4.
Uhlala uzama ukubonakala ngathi inkwenkwezi.
Ukuba into enomdla wakho ikufuphi, uzama ukubheka ngendlela esebenzayo ngokunokwenzeka. Ugqoke kwifashoni yakutshanje. Kodwa eqinisweni, xa ebona ubuhle obuhle, uya kuyika ukuza. Uninzi lwabafana alufuni ukuthandana namantombazana abathi, ngenxa yokonwaba, besoyika ukulahlekelwa yimbonakalo yabo okanye ukuphazamisa iinwele zabo.
Ukujonga nokuziphatha ngokwemvelo nangokwemvelo. Ukulula, kodwa ukucinga kwakho kunye neenwele, kungcono. Abafana abasayi kuqaphela ukuba ngaba uchithe iyure yonke ekubonakaleni kwakho okanye imizuzu elishumi. Kodwa ngokuqinisekileyo baya kuqaphela ukuzithemba kwakho kuwe kunye nezinga lokuthembela kwakho.
I mpazamo 5.
Uyavumelana ngesondo ngosuku lokuqala.
Kwenzeka ukuba, ukuba unomdla kakhulu ngumfana kunye nokulahlekelwa yintloko, uzinikele kuye ngomhla wokuqala. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuba aphumeze isikhundla sakho. Ukufikeleleka kwakho lula kulula nje ukuvelisa indlela yendalo. Ngoko uya kulahlwa ixesha lokutshiswa kweentsilelo, ixesha leemvakalelo eziqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqathayo, eziza kugcinwa kwimemori yakho ebomini.
Ukumhlukumeza kwamanye amatyelelo angama-5-6, ukuba unyanzelekile ubuhlobo obude. Kwimeko apho ukukhangwa ngokwesondo kungonelelwanga ngokukhawuleza, indoda inomdla wokuthanda!
Yithi hayi inkohliso: njani ukwahlula ikhofi yangempela kwi-counterfeit?
Kunokuba ulahle imivimbo
Nguwuphi umntwana ohlala kuyo ukukhetha?
Misela ubukhulu bebhasi
Shish kebab kwi-salum kwi-lattice
Yintoni enokuyenza ukuze ube ne-diathesis kubantwana
I-Risotto enebell pepper
Amapheya aphekiweyo kunye nokufafazwa kwenhlama
UDiyana Dorozhkina, igama langempela
Yintoni ekhusela izandla zethu ukuba zihle?
I-recipe yeapula ezifakiwe